New zemininingwane Links Asia Nge-Europe | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > New zemininingwane Links Asia Nge-Europe
(Kugcine ukubuyekezwa On: 18/02/2021)
Umugqa omusha isitimela usethule, esehlanganise Azerbaijan, igalikuni, futhi Georgia. Umugqa luyasibekela 820 Angu futhi yokuhlala freights ngaphezu izitimela umgibeli. Okokuqala, umugqa Izoba ngeyokuqala ukuxhuma eYurophu nase China ngenkathi ngokudlula Russia. The train will operate from Azerbaijan’s capital Baku and the Georgian capital Tbilisi to the city of Kars in Turley. Ngaphezu kwalokho, It kuzonciphisa uhambo isikhathi phakathi kwengqalasizinda yesitimela yaseYurophu kanye China ujantshi. Abongameli Azerbaijan, igalikuni, futhi Georgia, kanye nabamele European Union, ukuwo kuvulwa omusha umugqa isitimela.
Okokuqala, umugqa isitimela ekuqaleni kuhlelwe ukuba ziqale ukudayisa 2010 bese ungena 2012. Nokho, ngenxa umugqa edabula Armenia, kokubili US kanye EU akazange ngokwezimali neqhaza futhi lokhu kwenze ukubambezeleka. Ngaphezu kwalokho, ulayini udlula emazweni abekade enawo imingcele livalelwe nomunye (eyaqala i-Soviet Union).
Okwesibili, the line which is named the 'Eurasia Ibhuloho', izoxhumanisa umnotho lamazwe udabula. isiShayina izimpahla athuthwe esuka China eYurophu kule layini nje 12 izinsuku. Ngaphezu kwalokho, le isitimela, kuhanjiswe 5 amathani ayizigidi ezingu wezimpahla ngonyaka nale nombolo kulindeleke ukuba sifinyelele 17 abayizigidi ezingu ngokuhamba kwesikhathi. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuyokwenza ethekwini ithuluzi e Azerbaijan kunazo zonke iCaspian Sea esifundeni.
Azerbaijan akakasitsheli izindleko egcwele umugqa Nokho it is ukuthi they lent Georgia eyaziwa $775 ukuze baxhase ingxenye Georgian komugqa.
manje Kazakhstan umise ngokwaso njengoba entsha 'Silk Road’ nomsebenzi wayo wezimpahla owandayo phakathi kweYurophu ne China. Ngokomlando Kazakhstan wakhonza njengephayona isimo yokuxhuma Europe, I-Asia, futhi India. Isizathu sokuthi umsebenzi wezimpahla waseKazakhstan uvuseleleke futhi wukuthi usika ibanga laseYurophu uye e-Asia nge 10,000 amakhilomitha. Ngaphezu kwalokho, Kazakhstan usechithe iminyaka engaphezu $3 billion ujantshi ayo okuphetha acashunwe. Lokhu kuhlanganisa $250 ayisigidi esetshenziswe ku Khorgos Gateway. Leli sango livumela izitimela zaseChina ukuthi zidlulisele izimpahla zazo ezitimeleni zaseYurophu ngokugwema isidingo sokushintsha olayini.
Okokuqala, umongameli Azerbaijan ubeke amazwana isitimela
I-Baku-Tbilisi-Kars ujantshi isixhumanisi emfushane futhi enokwethenjelwa kakhulu phakathi kwe-Asia neYurophu
Ngaphezu kwalokho, European Union amazwana
Kuvulwa Baku-Tbilisi-Kars ujantshi kuyisinyathelo ezinkulu kwezokuthutha ukulumbana ngokuxhumanisa-European Union, igalikuni, Georgia, Azerbaijan, nase-Asia Ephakathi ... eduze lasendulo Silk Road,
Thenga amathikithi isitimela
Njengoba usuvele lapha, kungani ungathathi 3 imizuzu ukuthola okungcono nethikithi lakhe lesitimela ukuze uhambo lwakho olandelayo? Noma ngabe ukuphi uhlela ukuya eYurophu sikwazi ukukusiza uthole amathikithi. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukubona i-Alps of Switzerland futhi Italy or perhaps visit countries like Belgium futhi Hungary sinezinto nawe simboziwe. Ukubhuka amathikithi akho isitimela manje. Khokhela amathikithi usebenzisa zonke izindlela zokukhokha eyaziwa kakhulu
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnew-train-links-asia-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#asia #asiaeurope #raillink europeantravel Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi
Ngiyakuthanda ukuhamba kodwa ubungalindelanga ukuthi ngingasho lokho, Ngingumoya okhululekile ohamba eYurophu futhi ngisebenza embonini yezitimela, ngiyethemba uyakuthanda engikubhalayo - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze ngithinte